Iwu ulo akwukwo - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Na BLI, anyị na-etinye ụkpụrụ Bekee na-French-Only. E guzobewo iwu a iji nyere gị aka ịmekwuwanye asụsụ Bekee ma ọ bụ French n'asụsụ ọmụmụ gị na Canada. Iji nyere gị aka imeziwanye ogo asụsụ gị, a ga-atụ anya na ị ga-ekwurịta okwu naanị n'asụsụ ị na-amụ n'oge niile n'oge BLI.
Ọ bụrụ na ị mebie iwu, ị ga-enweta ụgwọ:
Mmejọ mbụ: Ị ga-enweta Kaadị Warning.
Mmebi nke abuo: A ga-egbochi gị na BLI maka otu ụbọchị, a ga-edekwa ya dịka ọ na-adịghị.
Nke atọ: A ga-egbochi gị site na BLI maka ụbọchị atọ, a ga-edekwa ya dịka ọ na-adịghị. Ọ ga-adị mkpa izute gị na onye nhazi ihe omume ahụ.
Mmebi nke anọ: A ga-egbochi gị na BLI maka ụbọchị ise, a ga-edekwa ya dịka ọ na-adịghị. Ọ ga-adị mkpa izute gị na onye nhazi ihe omume ahụ.
Mmebi nke ise: A ga-ahapụ gị n'ụlọ akwụkwọ maka otu nnọkọ ma ọ bụ otu.
Ezigbo na nkwenkwe
BLI na-atụ anya ka ụmụ akwụkwọ nọrọ n'oge ha klas. Ọ bụrụ na nwata akwụkwọ anọ ugboro atọ na otu klas, ọ bụ otu nha. Ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ aga obere karịa 80%, ha agaghị enweta akwụkwọ ha.
BLI na-agba ume ka mmekọrịta ya na omenala n'etiti obodo ya; Otú ọ dị, iwu ụlọ akwụkwọ na-egosi na ndị ọrụ anaghị ekwe ka ha na ụmụ akwụkwọ na-anọkọ n'ememe oge na ihe omume BLI.
Hapụ nke enweghị
A na-ekwe ka ụmụ akwụkwọ na-abịa maka izu 24 na ndị ọzọ ka ha rịọ ka ha hapụ akwụkwọ. Nhapụ nke a enweghị ike ịdị ogologo karịa izu anọ. Ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ahụ nyere gị akwụkwọ ezumike nká, a ga-atụgharị akwụkwọ ha. Ọ bụrụ na ị rịọ maka ezumike nke ịnọghị akwụkwọ ga-agwụchaa izu 12. Ọ bụrụ na ha na-eme njem na mba ọzọ, ha ga-enwerịrị visa ziri ezi.
Ọ bụ ezie na nke a bụ ọnọdụ siri ike, mgbe ọ bụla nwatakịrị na-eche na ụlọ akwụkwọ ebe ọ nọworo na-enyere aka ịkwalite nkà mmụta asụsụ maọbụ ọ bụrụ na o siri ike, ọ nwere ike ịrịọ mgbanwe nke klas. Iji mee nke ahụ, ọ ga-achọ ịgakwuru onye nhazi ihe ọmụmụ n'oge izu mbụ nke ọmụmụ. Enweghị mgbanwe ọ bụla ga-ekwe omume mgbe izu otu.
Ọgwụ na mmanya
Iwu BLI banyere ọgwụ ọjọọ na mmanya:
- Akwụsịla ịṅụ ọgwụ ọjọọ na mmanya na-aba n'anya n'ụlọ akwụkwọ.
- A gaghị ekwe ka ịṅụ mmanya na ụlọ akwụkwọ, na ihe omume ụlọ akwụkwọ, ọrụ ma ọ bụ njem na njem ọ bụla, ma ọ bụ
ndị ọrụ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ.
- Onye ọ bụla na-adịghị akwụkwọ / obere ụmụ akwụkwọ nwere, na-eji, na-ere ma ọ bụ na-ekesa iwu (dịka wii wii, ọgwụ ọgwụ ọgwụ, wdg.) Ma ọ bụ
ọgwụ ndị iwu na-akwadoghị, ọgwụ nri, mmanya ma ọ bụ ụtaba mgbe ọ bụla n'ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ n'okpuru ikike nke ụlọ akwụkwọ ahụ,
na-edo onwe ya n'okpuru ntaramahụhụ kachasị njọ, gụnyere nkwụsịtụ ma ọ bụ nchụpụ.
- Nlekọta ụlọ akwụkwọ ahụ banyere ọgwụ ọjọọ na ịṅụ mmanya na-emetụta ụmụaka niile na-amụ akwụkwọ na BLI. Ụlọ akwụkwọ ahụ nwere ikike
chọpụta ihe ọ bụla ị na-amụrụ ihe ma ọ bụrụ na a na-enyo nwa akwụkwọ a anya na ya nwere ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ihe iwu akwadoghị ma ọ bụ ihe dị n'ụlọ akwụkwọ, na njem
na ihe omume. Ụmụ akwụkwọ kwenyere na ha na-achịkwa ọgwụ ma ọ bụ mmanya na-enwe nsogbu dị njọ, gụnyere nkwusioru
ma ọ bụ ịchụpụ.
Biko pịa ebe a maka nkọwa:
ỤLỌ NKWUKWỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ